onlineakhabar.com: गर्मी भयो? अब यसरी बनाउनुहोस् घरमा फालिएका सामान बाट AC (तरिकाको भिडियो सहित)
Amazing Boy, Amazing News, Amazing Video, Main News, Tips, Video » गर्मी भयो? अब यसरी बनाउनुहोस् घरमा फालिएका सामान बाट AC (तरिकाको भिडियो सहित)
गर्मी भयो? अब यसरी बनाउनुहोस् घरमा फालिएका सामान बाट AC (तरिकाको भिडियो सहित)
दिन प्रतिदिन गर्मी बढ्दो छ । भारतमा त अझ ५० डिग्री सेल्सीयस नै पुगेको छ । यस्तो गर्मी बाट बच्नको लागि हामी फ्यान, एसी जस्ता कुराहरु प्रयोग गर्ने गर्दछौ । तर हाम्रो जस्तो देशका लागि यो एसी खरिद गर्ने क्षमता धेरै कमको मात्र हुन सक्दछ । यदि खरिद गर्ने क्षमता छ भनेपनि नेपालमा बढ्दै गइरहेको लोडसेडिङका कारण ति बस्तुहरु प्रयोग गर्न बाट बञ्चित हुनुपरेको छ।
यदि तपाईलाई गर्मी सहन सक्नुहुँदैन भने यस भिडियोमा तपाईकै घरमा फालिएका सामाग्रीहरुको प्रयोग गरेर होममेड एसी तयार पारेर देखाइएको छ । जुन तरिका तपाईले पनि सिकेर बनाउन सक्नुहुन्छ । हेर्नुहोस् तरिका सहित को भिडियो
Tags : Amazing Boy Amazing News Amazing Video Main News Tips Video